App Store Review Guidelines (Part 3)
11.Purchasing and currencies
11.1 သင်၏ App သည် Unlock (သို့) Enable Additional Features (သို့) စက်ကိရိယာများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို App Store ကိုကျော်လွန်ပြီး ပြုလုပ်ထားပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
11.2 သင်၏ App သည် ငွေပေးချေရသော လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိခဲ့ပါက Apple ၏ App Purchase API (IAP) ၏ Services များကိုကျော်လွန်ပြီး System ကိုပြုပြင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ထားရှိပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
11.3 သင်၏ App သည် IAP Services ကိုအသုံးပြုပြီး အရောင်းအဝယ်ပစ္စည်းများကို Application ၏ ပြင်ပတွင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းများ လုပ်ဆောင်ထားပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
11.4 သင်၏ App သည် IAP ကိုအသုံးပြုပြီး Game အတွင်းမှ ပိုက်ဆံများ (သို့) အခြားသော Credit (or) Currency များကို Purchase လုပ်ရာတွင် ထို Credit များနှင့် Currency များကို သင်၏ App အတွင်းသာ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။
11.5 သင်၏ App သည် IAP ကိုအသုံးပြုပြီး ဝယ်ယူထားသော အရာများကို Expire ဖြစ်ခြင်း (သို့) ပြုလုပ်ခြင်းများ ပါရှိပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
11.6 သင်၏ App သည် IAP ဖြင့် Content Subscriptions ပြုလုပ်ရာတွင် User များ၏ Devices များအားလုံးအတွက် အနည်းဆုံး ၇ ရက်အတွင်း အသုံးပြု၍ရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးထားရမည်။
11.7 သင်၏ App အတွင်းတွင် Item များကို ဝယ်ယူဖို့အတွက် IAP ကိုအသုံးပြုရာတွင် မှန်ကန်သော Purchasability Type များကိုသာအသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။
11.8 သင်၏ App သည် IAP Services ကိုအသုံးပြုပြီး Purchase ပြုလုပ်ရာတွင် iOS မှထောက်ပံ့ထားသော Built-in capablities များ (eg. Camera , Gyroscope ) များကို Access ပြုလုပ်ထားခြင်းများပါရှိပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
11.9 သင်၏ App သည် အငှားအဖြစ် (သို့) အခြားသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရက်အကန့်အသတ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားခြင်းများပါရှိပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
11.10 အာမခံ နှင့်သက်ဆိုင်သော App များဖြစ်ပါက Free သတ်မှတ်ပေးထားရမည်။သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်၏ ဥပဒေများကိုလေးစားလိုက်နာမှုရှိရမည်။ထို့ပြင် ထိုအတွက် IAP Service ကိုအသုံးမပြုရပါ။
11.11 ယေဘုယျအားဖြင့် သင်၏ App သည် စျေးကြီးရင် ကြီးသလောက် ကျွန်တော်တို့ Apple Review Team မှလည်း အသေးစိတ် စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
11.12 သင်၏ App သည် မည်သည့် Subscriptions ကိုမူ ကမ်းလှမ်းချက်များပါရှိပါက IAP Services ကိုအသုံးပြုရမည်။ထိုအတွက် Apple သည် 70/30 အခွန်ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
11.13 သင်၏ App သည် Purchase ပြုလုပ်ခြင်း (သို့) Subscriptions များကိုပြုလုပ်လိုပါက Buy Button ကဲသို့ Button ကိုနှိပ်လိုက်သောအခါ Website တစ်ခုသို့သွားရောက်ကာ ငွေပေးချေမှုများကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်ခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
11.14 သင်၏ App သည် ပြင်ပမှ ငွေပေး၍ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းများ ဥပမာ - Magazines များ , Newsapaers , books ,audio , music and Video များကို Read (or) Play လုပ်ခွင့်ရှိပါသည်။
ထို့အတွက် Apple အနေဖြင့် ပြင်ပမှ ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းများအတွက် မည်သည့် အခွန်အခမှ ရယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
12.1 သင်၏ App သည် Apple ၏ Site မှ (eg. Apple.com ,iTunes Store , App Store , iTunes Connect , Apple Developer Program , etc) များမှ အချက်အလက်များကို ရယူခြင်းများ (သို့) Ranking ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို Apple Site နှင့် Services များကိုအသုံးပြုထားခြင်းများ ပါရှိခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
12.2 Applications သည် Apple မှသတ်မှတ်ထားသော RSS Feeds (iTunes Store RSS Feed) မှ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
12.3 သင်၏ App သည် Web Clippings , Content Aggregators (or) Collections of links များပြုလုပ်ပါရှိထားပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
13.1 သင်၏ App သည် User အား Apple Devices ကိုအသုံးပြုပြီး Devices များအား ထိခိုက်အောင် ပြုလုပ်တိုက်တွန်းထားပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
13.2 သင်၏ App သည် Devices ၏ Battery များကို အလျှင်အမြန်ကျဆင်းစေခြင်း (သို့) အပူလွန်ကဲအောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းများ ပါရှိခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
14.1 မည်သည့် App မဆို တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အသရေဖျက်ခြင်း ၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း ၊ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းစေရန်ပြုလုပ်ခြင်း ပြောဆိုခြင်း (သို့) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု ၊ နေရာတစ်ခုခုကို ထိခိုက်အောင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပါရှိခဲ့ပါကငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
15.1 သင်၏ App သည် လူ ၊ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်၏ သတ်ဖြတ်မှုကဲ့သို့ ပုံများ ၊ သေနတ်ဖြင့် ရက်ရက်စက်စက် ပစ်သတ်ခြင်းများ ၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းများ ပါရှိထားပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
15.2 သင်၏ App သည် ကလေးသူငယ်များကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်း (သို့) အခြားသော ထိခိုက်မှုများ ပါဝင်ခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
15.3 သင်၏ Game အတွင်းမှ ရန်သူသည် အပြင်မှာ တကယ်ရှိနေသော အစိုးရ ဠာနများ နှင့်အခြားသော Corporation များကို တိုက်ခိုက်ခြင်း ၊ လျှို့ဝှက်သွားခြင်း စသကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါရှိထားပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
15.4 သင်၏ App အတွင်းမှ လက်နက်များသည် ပြင်ပတွင် အမှန်တကယ်ရှိပြီး တားမြစ် လက်နက်များ ဖြစ်ခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
15.5 သင်၏ App သည် Russian Roulette Game ပါဝင်ခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
16.1 သင်၏ App သည် တစ်စုံတစ်ခုကို အလွန်အမင်းကန့်ကွက်သော (သို့) ရိုင်းပြသော Content များပါဝင်ခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
16.2 သင်၏ App သည် User အား မနှစ်မြို့ဖွယ် (သို့) ဝမ်းနည်းစေသော အပြုအမှု (သို့)ထိုကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်ခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
17.1 သင်၏ App သည် User နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို ရှေးဦးစွာ User ၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲနှင့် အခြားသော ပြင်ပသို့ ထုတ်လွှင့်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။ထို့ပြင် အသုံးပြုမည့် User ၏ အချက်အလက်များကို မည်သည့်နေရာတွင် မည်သည့်ပုံစံဖြင့်အသုံးပြုမည်ကို ကြိုတင်အသိပေးရမည်ဖြစ်သည်။
17.2 သင်၏ App သည် User ၏ Personal Information များ (ဥပမာ- email address , date of birth )များကို Share ပြုလုပ်ထားပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
17.3 သင်၏ App သည် Data Collection တစ်ခုထဲအတွက် Minor Target ပြုလုပ်ထားပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
18.1 သင်၏ App သည် Pornographic Material များပါဝင်ပါက Webster’s Dictionary ထဲမှ အတိုင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Organs များနှင့် အခြားသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပေါ်ပေါ်ထင်ဖော်ပြထားခြင်းများ ပါဝင်ခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
18.2 သင်၏ App သည် User အား Pornographic ကဲသို့ ဓာတ်ပုံများ ၊ ရုပ်ရှင်းများကို ဖန်တီးခြင်းများ ခွင့်ပြုထားပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
19. Religion , culture and ethnicity
19.1 သင်၏ App သည် ဘာသာရေးများနှင့်ပက်သက်သော အကြောင်းအရာများ ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရာတွင် အခြားသော ဘာသာများကို တိုက်ခိုက်သော အကြောင်းအရာ များကဲ့သို့အကြောင်းအရာများ ပါဝင်ခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
19.2 သင်၏ App သည် ဘာသာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော Quote များပါဝင်ခဲ့ပါက ထိုအကြောင်းအရာများကို သေချာတိကျစွာ ထည့်သွင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်ခြင်းများပါဝင်ပါကလည်း တိတိကျကျ ဖြင့်ပြန်ကာ အများအမြင်မှာ ဝေဝါးအောင် မပြုလုပ်ရပါ။
20. Contests , sweepstakes , lotteries ad raffles
20.1 Sweepstakes နှင့် အခြားသော အချက်အလက်များကို ဖန်တီးသူ Developer / Company မှသာ ထောက်ပံ့ရမည်ဖြစ်သည်။
20.2 Sweepstakes နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်လက်များကို App အတွင်းတွင် ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြပေးထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ထိုအချက်အလက်များသည် Apple နှင့်မည်သို့မှ မသက်ဆိုင်ပါ။
20.3 ထိုအချက်အလက်များသည် ဥပဒေ အရ လက်သင့်ခံနိုင်သော အချက်အလက်များသာဖြစ်ရမည်။ Lottery App ဖြစ်ခဲ့ပါက ပြင်ပမှ Lottery ကဲသို့ အချက်အလက်များကိုသာ အထောက်အပံ့ရယူပြီး ပြုလုပ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
20.4 သင်၏ App သည် User ကို App အတွင်းတွင် Lottery နှင့် Raffle ticket များကို Purchase ပြုလုပ်ခြင်းများ ပါရှိခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
21.1 သင်၏ App သည် အများအကျိုးဆောင်သော အလုပ်များ ၊ လှုတန်းခြင်းများ ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များ ဖြစ်ပါက Free ဖြစ်ရပါမည်။
21.2 Donations ပြုလုပ်ပါက Donation ပြုလုပ်သော အရာများကို Web Safari မှ Website မှတစ်ဆင့် (သို့) SMS မှသာ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
22.1 သင်၏ App သည် သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေ၏ ချမှတ်ထားသော ဥပဒေ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ထိုအရာများသည် ပြုလုပ်သူ Developer တွင်သာ ဥပဒေနှင့်ပက်သက်အချက်အလက်များတွင် တာဝန်ရှိသည်။
22.2 သင်၏ App သည် မရိုးသားသော ၊ လိမ်လည်သော ၊ဟုတ်သယောင်ယောင် အချက်အလက်များ ပါဝင်ခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
22.3 သင်၏ App သည် ရာဇဝတ်မှုများကို တစ်နည်းတစ်ဖုံးဖြင့် အားပေးအားမြှောက်ပြုလုပ်ထားခြင်းများ ပါဝင်ခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
22.4 သင်၏ App သည်တရားမဝင် ဖိုင် Sharing များပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပါဝင်ခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
22.5 သင်၏ App သည် တရားမဝင်သော လောင်းကစားနည်းများ နှင့်အခြားသော တရားမဝင် ကစားနည်းများကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်ခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
22.6 သင်၏ App သည် အမည်မသိ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများနှင့် အခြားသော လျှို့ဝှက် SMS ပို့ခြင်းများ ပါဝင်ခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်။
22.7 Developer သည် သူ၏ App ကိုအသုံးပြုပြီး User ၏ Password များနှင့် အခြားသော User Private Data များကို ရယူဆောင်ရွက်ကြိုးပမ်းမှုများ ပါဝင်ခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
22.8 သင်၏ App သည် DUI Checkpoints များပါဝင်ခဲ့ပါက ဥပဒေအရ ခွင့်မပြုသော လုပ်ဆောင်ချက်များ (ဥပမာ - အရက်သောက်ပြီး ကားမောင်းခြင်း) ကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုလုပ်ထားခြင်းများပါဝင်ခဲ့ပါက ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အခု ဖတ်နေတဲ့ App Store Guideline အပိုင်းကတော့ ဒီမှာပဲ အဆုံးသတ်ပါပြီခင်ဗျာ။ တစ်စုံတစ်ရာ လွဲမှားမှုများ ရှိခဲ့ပါက ကျွန်တော့်တာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်။ မှားယွင်းနေပါက ဆက်သွယ်အကြံပြုဝေဖန်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အခုဆက်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ကြုံခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံထဲက ငြင်းပယ်ခံရတဲ့ အချက်တွေကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမ အချက်ကတော့ Rules (2.23) ဖြစ်တဲ့ iOS Storage Data Guideline ကိုမလိုက်နာထားလို့ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Shweyoe Pro ရေးတုန်းက iOS5 မှာ Document Directory ထဲမှ Sqlite Database ထဲကို Data တန်းထည့်လို့ရပေမဲ့ iOS6 မှာ Data Storage Flow ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာ ထည့်လို့မရတော့ပါဘူး။ ဒီအတွက်ကြောင့် ကျွန်တော် ဟာ စာလုံးအသစ်ထည့်ချင်ရင် Document Directory ထဲကို Sqlite Database ကို Copy ကူးမှပဲရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် App First time loading မှာ Copy ကူးခဲ့ပါတယ်။
Copy ကူးခဲ့တဲ့ Database Size က 35MB ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော် ငြင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို Review လုပ်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်ရဲ့ တောင်းပန်စာကိုပါ တစ်ခါတည်း ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ မလုပ်လို့မဖြစ်လို့ပါ။ ပထမဆုံးအကြိမ်တော့ Copy လုပ်ခွင့်ပြုပါလို့ တောင်းပန်စာပို့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သူတို့အနေနဲ့လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ Rules 2.12 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် Project တစ်ခုလုပ်ပေးတုန်းက Youtube နဲ့ Facebook ကို UIWebView နဲ့ Simply Embed လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ ငြင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်.
အဲ့ဒီအချက်ပါပဲ. ကျွန်တော် ​ငြင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရတာ. အဲ့ဒီ နှစ်ကြိမ်ကြုံဖူးသွားတော့ App Store Guideline ကိုသေချာပြန်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ရှောင်စရာ ရှားစရာတွေကို မှတ်ပြီး App Store ပေါ်ကို မတင်ခင်ကတည်းက ကြိုတင်ပြီး သေချာစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အခါမှာ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Reject အလုပ်ခံရတဲ့ အကြိမ်တော်တော်နည်းသွားပါတယ်… :D
ကျွန်တော့်ဆောင်းပါးကို အားပေးဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။